Friday January 20, 2017 - 23:54:02 in Wararka by Xarunta Dhexe
In aan idin tusno guriga jiifka ee Lincoln iyo sariirihii mar ahaa kuwanagii, si aan idiin barno dadka oo dhan, kuwa ubaxyada ka shaqeeya, kuwa beeraha iyo qaabdhismeedka kale ee dhulka ka shaqeeya iyo shaqaalaha kale ee noloshooda galiyay in dhismahan taariikhiga ah uu noqdo guri”.
"afarteenuba waxaan si tartiib ah u dhex lugaynay hoolalka cajiibka ah ee ku yaalla gurigaas oo aad ku qasbanaydeen in aad u soo wareegtaan.
"Waxaad u socdaaasheen Liberia iyo Morocco idinkoo hooyadiin la socda si aad ula hadashaan gabdho uguna sheegtaan ahmiyadda waxbarashada – gabdhahaas oo iyaguna idin arkay, waalidkiinna arkay, kuwaas oo arkay cidda ay noqon karaan haddii ay aqoonta sii wataan oo ay wax bartaan.
Waxaad ka qayb gasheen cashooyin ay xukuumaddu samaysay, waxaad la kulanteen hogaamiyeyaasha caalamka, waxaana idiin suuragashay in aad ku qosashaan kaftankii uu aabihiin ka jeediyay xafladda sanad laha ah ee Aqalka Cad ka dhacda ee loo yaqaanno Thanksgiving turkey pardon, idinkoo carruur ahna waxaad dhigateen iskuul waxaadna yeelateen asxaab.
Madaxweynaha Oo Furay Xarun Lagu Xanaaneeyo Gabdhaha Agoonta Oo Dib U Habeyn Lagu Sameeyay + Sawirro
30/06/2016 - 18:04:54
Madaxweynaha Soomaaliya Oo Waraaqihii Aqoonsiga Ka Gudoomay Danjiri cusub + Sawirro
03/02/2016 - 23:38:40
Waxaad ii sheegtaa hal Gabar oo kamid ah Gabdhaha aad intarnerka ka wada sheekaystaan oo aad hada hadii lagu yiraahdo Guurso aad guursanaysid?
20/12/2015 - 02:44:48
Madaxweynaha Kenya oo waraaqaha aqoonsiga ka guddoomay Safiirka cusub ee Soomaaliya oo ku labisan hido iyo dhaqan (Sawiro)
04/08/2015 - 07:38:45
15 July 2015 - Daily Monitoring Report; Somalia: 7 Militants Killed After Ambush On Ethiopian Troops
15/07/2015 - 18:03:44
Xog+Caddeeyn Warqad laga Qoray C/Gaas oo ka Nixisay''
18/05/2015 - 10:21:17
Puntland oo Beeniyay in Ciidamada Maamulka Soomaaliland ay la Wareegeen Laasqoray
09/03/2015 - 12:45:51
Gabdhaha G/Banaadir oo Muqdisho ku qabtay kulan lagu taageerayo Madaxweyne Xasan Shiikh Maxamuud
01/12/2014 - 11:32:45